We.com.mm - သင့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့ပစ်မလဲ?
ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးကို တစ်ချို့ Relationship တွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို ကြုံတွေ့နေရပါတယ်…။ ဘာကြောင့်ဂရုမစိုက်တာလဲ? အကြောင်းအရင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်…။ အလုပ်တွေမအားတာကြောင့် သင့်ကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာ၊ အလုပ်ကိုအကြောင်းပြပြီး တမင်သက်သက်ဂရုမစိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်…။ အလုပ်တွေကြောင့်မအားနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဂရုမစိုက်နိုင်ပေမယ့် အားတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့အချိန်ပေးပြီး သေချာဂရုစိုက်ပေးတဲ့သူမျိုးကိုကျတော့ ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး…။ ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်လား၊ မစိုက်ဘူးလားဆိုတာက သူ့ကိုယ့်ကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကိုကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်…။ ကိုယ့်ကိုချစ်တယ် မချစ်ဘူးဆိုတာလည်း သင်ကိုယ်တိုင်က ပိုအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ…။ ကိုယ့်ကိုမချစ်လို့ ဂရုမစိုက်တော့တဲ့သူကို စိတ်အပင်ပန်းခံပြီး ဆက်တွဲမနေသင့်ပါဘူး…၊ ဒီတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲ…။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆက်ဖြတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ…။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ သင်ကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်၊ သူကလည်းသင့်ကိုချစ်တယ်…၊ သူ့ဘက်က မတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့် ဂရုစိုက်ဖို့မအားတာဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေရှိပါတယ်…။
- သင့်ကိုယ်သင် အမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့ရပ်တည်နိုင်တယ်လို့ အမြဲစိတ်ထဲမှာတွေးထားပါ…။ သူ မအားမလပ်ဖြစ်နေလည်း တစ်ယောက်ထဲနေတတ်အောင် ကြိုးစားပြီးနေပါ…။
- လူတိုင်းမှာကိုယ်စီအလှအပတွေရှိနေပါတယ်…။ ပင်ကိုယ်အလှထက်ပိုလှအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ဆင်ပါ…။ သူကကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်ဖို့မအားတဲ့အချိန်မှာ Negative Thinking တွေမဝင်အောင် တစ်ယောက်ထဲနေတတ်အောင်နေပါ…။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်ထွက်စားတာတို့၊ သူတို့အိမ်သွားလည်ပြီး စကားတွေပြောတာမျိုး၊ သင့်အိမ်မှာပဲ အိမ်ကလူတွေအတွက် မုန့်လုပ်ပေးတာမျိုးစတာတွေလုပ်ပြီး အချိန်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်…။
- ဒီလိုမဟုတ်ပဲ သင့်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့် သင်တန်းလေးတစ်ခုခုတက်သင့်ပါတယ်…။ အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့သင်တန်း ဒါမှမဟုတ် စကားပြောသင်တန်းတစ်ခုခုပေါ့…။ သင်တန်းတစ်ခုတက်ပြီး အချိန်ပေးလိုက်တော့ သင့်အနေနဲ့ တစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်သလိုမခံစားရတော့တဲ့အပြင် သင့်ချစ်သူ မအားလပ်တာကိုလည်း သင့်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးလို့မထင်ရစေတော့ဘူးပေါ့…။
- သင်တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါ…။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်ကိုတစ်ခြားစိတ်ရှုပ်စရာအတွေးတွေ ဝင်မလာစေပါဘူး…။
- အိမ်မှာပဲနေရတာပျင်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာ အပြင်ထွက်ပြီး သင့်စိတ်ကိုလည်း ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်…။ Spa သွားပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်လှအောင်လုပ်တာမျိုး၊ ဆံပင်ပုံစံStyle ပြောင်းတာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်…။
စိတ်ညစ်မခံပါနဲ့ .. ပျော်ပျော်လေးနေနော် ... :)